News - Olee ụdị ọrụ igwe na-akpacha ajị igwe nwere?
Igwe na-akpacha ajị ígwè nwere ọtụtụ ngwa, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ dị mfe, na ndozi dị mma. Enwere ike idozi ndị ọbịa n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. A na-eji igwe ịkwa osisi eme ihe site na iji usoro sayensị. Ihe mbụ bụ na igwe na-achịkwa moto dị ka mkpa anyị si dị. Nrụgide, ọsọ na ọrịa strok nke etinyere na ya nwere ike ịdabere na teknụzụ kwesịrị ịgbanwe, yana mmachi na ọrụ ndị ọzọ nwere ike mezue nke ọma.
Igwe na-akpacha ajị anụ nwere ọrụ nke igwe abụọ n'ime otu, nke nwere ike ịpịpu (nchara nchara, ọla kọpa, aluminium, ígwè nchara, igwe anaghị agba nchara, ihe mkpofu ụgbọ ala, wdg) n'ime nchịkọta nke ụdị na nkọwa dị iche iche dị ka cuboid, octagon, na sịlịnda. A na-egbutuzi ngwungwu ahụ ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ tupu oge eruo. A na-ejikarị usoro ịkwa osisi ndị a eme ihe na igwe igwe, igwe na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nhazi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ na-agbaze.
Mgbe ị na-akpacha ajị mpempe akwụkwọ a na-agagharị, agụba akpacha ajị kwesịrị ịkwaga ya na mpempe ihe na-agagharị, ya bụ, agụba akpacha ajị kwesịrị mezue ma ibelata ma na-akpụ akpụ n'otu oge, na obere sub-velocity v nke akpacha ajị na-agagharị mpempe mpịakọta kwesịrị ịdị ka nke mpempe akwụkwọ mpịakọta. Ọsọ ije a na - agba ọsọ dị vo ma ọ bụ karịa karịa 2% ~~ 3%, ya bụ, v = (1 ~ 1.03) v0. Mgbe ị na-akpacha ajị agba, ọ bụrụ na ọsọ ọsọ v nke akpacha ajị na-agagharị n'okporo ụzọ na-agagharị, ihe na-erughị ọsọ na-agagharị v0 nke mpempe akwụkwọ a, akụkụ nke ịkwa afụ ọnụ ga-egbochi mmegharị nke mpempe akwụkwọ a, ihe a na-atụgharị agbaji na-ehulata, ọbụnakwa na-eme ka mpempe akwụkwọ a na-atụgharị iji mechie ihe mberede mma. . N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọsọ ọsọ nke ngwa shea na ntụgharị nke ngagharị nke mpempe akwụkwọ n'oge ịkwa akwa ka ukwuu karịa ọsọ na-agagharị nke mpempe akwụkwọ mpịakọta v0, nrụgide nrụgide ka ukwuu ga-ewepụta na mpempe akwụkwọ a, nke ga-emetụta shiee ogo nke akpọrepu ibe. Na dịkwuo ibu ibu nke akpacha ajị igwe.
Dị ka dị iche iche ngwaahịa iche na nkọwa na onye ọrụ chọrọ, otu metal akpacha ajị igwe ga-enwe ike bee otutu nkọwa ka ogologo, na-eme ka ogologo akụkụ ndidi na àgwà nke ịkpụ ngalaba izute mkpa ụkpụrụ;) Ọ nwere ike izute Rolling igwe ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ otu Ngwa ọrụ chọrọ.
Post oge: Mar-09-2021
Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Ọla kọpa Scrap Baler, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Metal Powder Briquette Machine,